Mareykanka oo War Kasoo Saaray Duqeyn Lala Beegsaday Al-shabaab | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo War Kasoo Saaray Duqeyn Lala Beegsaday Al-shabaab
Mareykanka oo War Kasoo Saaray Duqeyn Lala Beegsaday Al-shabaab
Dowladda Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Ciidamo mareykan ah iyo kuwa Dowladda Federaalka Soomaliya ay duqeyn ku burburiyeen Saldhig Xarakada Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Saakow ee Gobolka Jubada Dhexe.
Saldhiga la burburiyay ayaa qiyaastii 185km dhinaca koonfur-galbeed ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaliya.
Mareykanka ayaa shegay duqeyntaas ay timid kadib markii dagaalyahanada Xarakada Al-shabaab ay mudooyinkii ugu dambeeyay ay kordhiyeen dagaalka ay ku qaadaan Saldhigyada Ciidamada Dowladda Soomaliya iyo kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Waxa uu sheegay in duqeyntaas lagu burburiyay Saldhig Xarakada Al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka Saakow ee Gobolka Jubada Dhexe , islamarkaana sidoo kale lagu dilay 10-sarkaal oo ka tirsanaa Xarakada Al-shabaab oo xirada xiligaas ku sugnaa.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo weerarkan ka warsaxaafadeed kasoo saaray ayaa yiri.
“Aroortii Shalay, waxaan amray in ciidamadeenna gaarka ah oo kaashanaya saaxiibadeenna caalamka in ay weerar ku qaadaana xarun tababar oo ay kooxda argagixisada ah ee al Shabaab ku lahayd meel u dhaw Degmada Saakoow ee Gobolka Jubbada Dhexe,Weerarkan oo ah ahaa mid guul ku dhammaaday ayaa lagu burburiyay xarun tababar oo muhiim u ahayd hawlaha amni darro ee ay kooxdan soo abaabusho. Tani waxay wiiqaysaa awoodda cadowga uu kusoo abaabuli karoweerarro cusub.”
Dagaalyahanada Xarakada Al-shaababa ayaa Gobolada Jubooyinka ka maamula deegaano badan,waxayan Mareykanka iyo Ciidamada Xoogga dalka Soomaliyeed ay dhowr jeer hore weeraro ku qaaden Saldhig Al-shaabab ay leeyihiin.
Sanadkii 2014-kii bishi September diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa duqeyn ku dilay Hogaamiyihii Xarakada Al-shabaab Ahmed Abdi Godane, kaasi oo muddo kadib ay Al-shabaab ay xaqiijiyeen gaaridiisa.
Afhayeenka Aqalka Cad ee Mareykanka Dana W. White ayaa xaqiijiyay in Dowladda Mareykanka ay garab taagan tahay Dowladda Federaalka Soomaliya islamarkaana ay ka shaqeynayso sidii Soomaliya loogu dhigi lahaa meel amaan ah.